“हो म समाजले पचाउन नसक्ने चरित्रहिन केटी हुँ” « Sajha Page
“हो म समाजले पचाउन नसक्ने चरित्रहिन केटी हुँ”
सखी-ओ हो धेरैपछि भेट भयो । कता छौँ तिमि आजभोली ? सरोजले नजिकै आएर सोध्यो । झण्डै सात वर्षपछि भेट भयो उसँग आज मेरो । १२ कक्षासम्म गाउँकै क्याम्पसमा पढेका थियौं हामी । ‘तिमि त के हो पूरै चेन्ज भइछौ त’ सरोजले भन्यो । म अचम्ममा परे के चेन्ज भएछ ? मैले सोधे । के चेन्ज भयो र ? ‘क्याम्पस पढ्दा तिमि कति सोझी थियौ । आजभोली पुरै रुप परिवर्तन भएछ नी’ उसले भन्यो । यस्तै गनथन मनथन कुरापछि हामी छुट्टियाँै ।